Wasiir: Duuliyaha ayaa lahaa shilka diyaaradda | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasiirka duulista Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Oomaar ayaa sheegay in saddex qof oo shaqaale ahaa ay ku dhaawacmeen shilkii diyaaradeed ee maanta oo Sabti ah ka dhacay Garoonka Muqdisho.
Wuxuu xaqiijiyay in duuliyaha diyaaradda ay ka timid ciladda, kadib markii uu lumiyay control-ka, maamulka diyaaradda xakameyn waayay markii cilad ay soo wajahday, isagoo kadib xoog kusoo dejiyay Garoonka, waxayna madaxa la gashay derbi dhinaca badda xiga.
Diyaaradda waxay shixnado raashiin gargaar ah u wadey Qaramada Midoobey, iyadoo la filayay inay Maanta ka degto Garoonka Beledweyne, balse dib ugu laabatay Muqdisho, maadaama cilada soo wajahday ay u saamixi waysay inay duulimaadka soo wadato.
Shirkada Kenyan ah oo Silverstone lagu magacaabo ayaa lahayd diyaaradda, oo la sheegay inay ahayd mid duugowday oo aan u qalmin in lagu sii shaqeeyo, iyadoo laga mamnuucay xitaa gudaha Kenya inay ka howlgasho.
Shilka ayaa sababay in la hakiyo duulimaadkii tagi lahaa Maanta Muqdisho, oo kuwa caalmiga iyo gudah isagu jira maadaama ay diyaaradda ku burburtay dhabaha ugu wayn ay diyaaradaha ku degtaan. [Halkan ka akhri warka]
0 Comments Topics: beledweyne garoonka muqdisho shil diyaaradeed
Howlgalkaan ayaa ahaa mid ay sii qorsheeyeen ciidanka xoogga dalka.
Diyaaradaha oo joojiyay duulimaadka Baledweyne
Warar 18 October 2020 18:02
Italy iyo DF oo kala saxiixday heshiis cusub
Warar 18 October 2020 12:27